Masinina mametaka gilasy, milina fanala gilasy, fampifangaroana voankazo - Runchen
Mpitondra manerantany amin'ny technolooy vokatra
Ampahafantaro ahy ny hevitrao, ataontsika mandeha ho azy ireo.
extrusion sy slicing tsipika
Vokatra vita amin'ny tsorakazo / vokatra esorina / boribory gilasy / kapoaka / kapoaka
Fenoy gilasy, sorbet, vokatra ranomandry rano ho lasa kônà, kaopy sy fitoeram-bokatra maro karazana, endrika sy habe samihafa.
Momba an'i RUNJIN
Runjin dia nanana andiany ...
Any Shina eto an-toerana dia mihamaro ny tanàna nanomboka niverina tamin'ny fiainana ara-dalàna, ary niverina niasa tamin'ny birao toy ny mahazatra. Tsy hisy fiantraikany amin'ny fametrahana sy ny komisiona. Ho an'ny tetikasa mitohy any ampitan-dranomasina, dia ...
Fankasitrahana avy amin'ny ...
Niara-niasa tamin'ny Unilever manerantany nandritra ny taona maro izahay. Tamin'ity volana ity dia nahazo hevitra tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay. Tena manetsika antsika hanao tsara kokoa .Ny ekipanay Runchen dia hanao izay ezaka tokony hatao mba hanaovana fikarohana ...
Fantatray fa ny fizotry ny famokarana sy ny endrika famolavolana ary ny famolavolana fahaiza-manao serivisy ara-toekarena dia miantoka ny fahombiazan'ny ...
Miorina amin'ny serivisy miompana amin'ny mpanjifa sy ny tombony ara-teknika, Runchen dia manolo-tena amin'ny fitaovana tsara kalitao sy serivisy tena tsara ...
Serivisy mahomby amin'ny filanao. Izahay dia miantoka ny fitaovanao mandeha amin'ny toe-javatra mety, ho fanampin'izay, afaka manohana ...